Kulamada ay yeelanayaan Xasan Sheekh Axmed Siilaanyo oo kasii socda jabuuti – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Waxaa Jamhuuriyadda Jabuuti ka soconaya wadahadal u dhaxeeya madaxweynaha dowladda Federaalka Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka dooni u goosadka ah ee Somaliland, Axmed Max‘ed “Siilaanyo”.
Labada mas’uul waxaa la kala socda wufuud, waxaana labada dhinac markii ugu horreysay shalay ku kulmeen qado sharaf uu u sameeyey madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle.
Kulmada labada dhinac ayaa lagu wadaa in maanta lasoo gebagebeeyo, lagana soo saaro war-murtiyeed, iyadoo la sheegay in wadahadalkan uu dabajoogi kuwii ka dhacay dalka Turkiga..
Safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Jabuuti ayaa xaqiijisay in xalay oo dhan ay socdeen wadahadallo u dhaxeeyay wafdiga ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland.
Kualnka maanta waxaa si toos ah isu soo hor fariisan doona Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Xaan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha maamulka Somaliland, Axmed Siilaanyo, iyadoo kulankaasi goob ka noqon doona madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle.
Wada hadalada Dowladda Federaalka iyo Somaliland ayaa sanadihii dambe lagu qabanayey dalka Turkiga iyagoo isla gaaray qodobo dhowr ah oo la isku raacay in laga dhabeeyo, kuwaas oo ay ugu weyneyd in laga wada shaqeeyo xiriir wanaag iyo in la iska ilaaliyo haddalada hawada la isu mariyo ee cilaaqaddka dab ku shidi kara.
Gaalkacyo: Gudoomiye ku xigeenka gobolka Mudug oo qarax ku dhaawacmay